Waa sidee xaaladda Magaalada Guriceel + SAWIRRO | Dhacdo
Home Wararka Maanta Waa sidee xaaladda Magaalada Guriceel + SAWIRRO
Waa sidee xaaladda Magaalada Guriceel + SAWIRRO
Xaaladda Magaalada Guriceel ee Gobolka Galgaduud ayaa u muuqato mid aanay waxba iska bedelin, tan iyo markii Xoogaga Ahlu Sunna ay Jimcihii bilaa dagaal kula wareegeen gacan ku haynta magaaladaasi.
Ciidamadii Galmudug ee magaalada ku sugnaa ayaa qaybtood magaalada uga baxay dhanka wadada aadda Dhuusamareeb, halka qaybtii kalena ay isu dhiibeen Xoogaga Ahlu Sunna.
Magaalada waxaa maalmo ka hor ka barakacay qoysas tiro yar, ka dib markii uu soo baxay warka sheegaya in Ciidamada Dowladda Federaalka iyo kuwa Galmudug ay Magaalada Dhuusamareeb ka wadaan abaabul ka dhan ah Ahlu Sunnada Gobolada Dhexe.
Dhaqdhaqaaqa ganacsi ee magaalada ayaa ah sidiisii, mana muuqato wax iska bedelay, dadkuna waxay u ganacsanayaan, sidoodii hore.
Tan iyo Sabtidii ayaa waxaan jirin wax duulimaadyo ah oo magaalada yimid. Duulimaadyadii Garoonka Guriceel ayaa loo weeciyay Garoonka Ugaas Nuur ee Magaalada Dhuusamareeb.
Waxa ka cusub magaalada ayaa ah inta aad dhex socoto wadooyinka inaanay indhahagu qabanayn askari qura oo wadada taagan, iyadoo amniguna yahay mid wanaagsan, inkastoo ay jiraan ciidan dharcad ah oo Ahlu Sunna ay ku daadisay magaalada.
Talaadadii waxaa guuldareystay dadaaladii ay Odayaasha Dhaqanka ugu kala dab qaadayeen Maamulka Galmudug iyo Hoggaanka Ahlu Sunna.
Xildhibaanada Baarlamaanka Federaalka ee deegaan doorashadoodu tahay Galmudug ayaa Arbacadii shalay waxa ay qaarkood waan-waan ka dhex bilaabeen labada dhinac, si looga baaqsado dagaal uu dhiig ku daato.
Ma cadda waxa ay ku dambayn doonto xaaladda Guriceel, Ahlu Sunna ayaase u muuqato mid u diyaargarowday inay difaacato gacan ku haynta magaalada, marka aad eegto dhufeysyada waaweyn, ee ay xoogageeda ka sameysteen duleedyada Guriceel, illaa wadada tagta Dhuusamareeb.
Previous articleKorneyl Rufle “Waxaan ka digayaa barmaamij socday muddo 4 bilood ah”
Next articleWasiirkii Amniga Galmudug oo is casilay, sababo ku aaddan xiisadda Ahlu Sunna